कोरोना सं*क्रमित अमिताभलाई अचानक के भयो ? रोक्न सकेनन् आँशु – Butwal Sandesh
कोरोना सं*क्रमित अमिताभलाई अचानक के भयो ? रोक्न सकेनन् आँशु
काठमाडौं । दुई साता अस्पताल बसेर बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनका बुहारी र नातिनी सोमवार डिस्चार्ज भएका छन् । उनीहरुले दुई साता पछि कोरोना जितेका हुन् । अघिल्लो आइतवार कोरोना पुष्टि भएपछि उनीहरु मुम्बईको नानावाती अस्पताल भर्ना भएका थिए । बलिउड सुपर स्टार अमिताभका परिवारमा पत्नी जया बच्चन वाहेक सबैलाई कोरोना पुष्टि भएको हो ।
कोभिड १९ परीक्षणमा बुहारी ऐश्वर्या र नातिनी आराध्याको नेगेटिभ रिजल्ट आएपछि उनीहरुलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिएको छ । अमिताभले ट्वीटर मार्फत त्यसको जानकारी गराएका छन् । बुहारी ऐश्वर्या र नातिनी आराध्यले कोरोना जितेको प्रति उनले खुसी ब्यक्त गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले खुशी र राहत मिलेको भन्दै सोसल मिडियामा पोस्ट गरेका हुन्।
आफ्नो नातिनी र बुहारी अस्पतालबाट घर फर्केको खुशीमा आफूलाई रोक्न नसकेको भन्दै उनले इन्स्टाग्राम त्यसवारे पोष्ट गरेका हुन् । उनले यसका लागि भगवानलाई धन्यवाद दिएका छन्। खुसीका कारण आँशु झर्नबाट रोक्न नसकेको पनि उनले बताएका छन् । लामो समय देखि अस्पतालमै रहेका अमिताभले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा पनि सुभेक्छुकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिने गरेका छन् ।
कोरोना सं*क्रमित भएका कारण एश्वर्याका पति अभिषेक पनि अहिले अस्पतालमै छन् । उनले पनि पत्नी र छोरीले कोरोनालाई पराजित गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालवाट यसवारेमा जानकारी दिएका थिए । उनी पनि अस्पतालवाटै सामाजिक सञ्जालमा सकृय छन् । अभिषेक बच्चनले सबै समर्थकलाई शुभेच्छाका लागि धन्यवाद दिएका छन्। ुउनीहरु दुवै अब घरमा हुनेछन्। म र बुबा (अमिताभ) उपचारका क्रममा अझै अस्पतालमा नै छौं,ु अभिषेकले भनेका छन्।
यस अघि भारतीय मिडियामा अमिताभ र उनको छोरा अभिषेकले कोरोना जितेर डिस्चार्ज हुन लागेको भन्दै समाचार आएपछि उनीहरुले त्यसको खण्डन गरेका थिए । अमिताभले समाचारको लिंक शेयर गर्दै यो झु*टो भएको बताएका थिए । अमिताभ र उनको परिवारको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै भारतका विभिन्न स्थानमा पुजा समेत लगाइएको छ ।